Hagaha barnaamijka 'Allo messaging messaging' ee Google
Waa maxay Google Allo?
Fiiri mareegta farriimaha iyo isdhexgalka Google ee Kaaliyaha
Google Allo waa app fariin farsamo oo laga heli karo Android, iOS, iyo webka. Iyadoo laga yaabo inay u muuqato mid kale oo farriin fariin ah, tartan kula WhatsApp, iMessage, iyo kuwa kale, sirdoonka caanka ah ee la dhisay, oo ah qaabka isdhexgalka ee Google, ayaa u kala dhigma, sida ay wax uga baran karto dabeecaddaada una adeecayso si waafaqsan. Allo sidoo kale wuxuu ka duwan yahay qaababka Google ee hal qaab oo asaasi ah: uma baahna xisaab Gmail. Xaqiiqdii, waxay u baahan tahay cinwaanka emailka, kaliya lambarka taleefanka. Waa kuwan wax kale oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Google Allo.
Maxay Allo u Leeyahay?
Markaad xisaabto xisaabta Allo, waa inaad bixisaa lambar telefoon. Si kastaba ha noqotee, adeegga looma adeegsan karo si aad u dirto SMS (farriimaha qoraallada hore); waxay isticmaashaa xogtaada si aad u dirto fariimo. Sidaa darteed, ma sameyn kartid adeegga fariinta sida macaamilka SMS-ka ee taleefankaaga.
Markaad bixiso lambarka taleefankaaga, waxaad arki kartaa cida ku taal liiska xiriiriyahaaga koonto intaad haysato lambarka taleefoonka. Waxaad sidoo kale xariiri kartaa Allo koontadaada Google, kuna marti galin kartaa xidhiidhadaada Gmail si aad ugu biirto. Si aad ula hadasho xiriirrada Gmail, waxaad u baahan doontaa lambarkooda lambarka.
Waxaad u diri kartaa farriimo dadka aan isticmaalin Allo ilaa iyo inta ay haystaan ​​iPhone ama Android smartphone. Isticmaalaha iPhone wuxuu helayaa fariin codsi ah oo la xidhiidha qoraalka iyadoo lala xiriirinayo App Store. Isticmaalayaasha Android waxay helayaan ogeysiis halkaas oo ay ku arki karaan farriinta ka dibna soo dejinta app haddii ay doortaan.
Waxaad isticmaali kartaa Allo si aad u dirto farriimaha codkaaga si aad u heshid oo aad sameyso wicitaano fiidiyo ah adigoo ku duubaya astaanta Duo ee wadahadal kasta. Duo waa bogga fariinta Google ee farriimaha.
Allo Security iyo Privacy
Sida Google Hangouts, dhammaan fariimaha aad u soo dirto Allo waxaa lagu keydin doonaa serverka Google, inkastoo aad iyaga tirtiri karto. Allo wuxuu wax ka bartaa dabeecadaada iyo taariikhda farriinta wuxuuna ku siinayaa talooyin marka aad qoraysid. Waxaad ka saari kartaa talooyinka aadna ku haysan karto asturnaantaada adiga oo isticmaalaya "Special Identification Messaging", kaas oo isticmaala xarfaha dhammaadka-dhamaadka si adiga kaliya iyo qofka qaataha ah uu arki karo nuxurka farriimaha. Iyadoo aan la garanayn, waxaad sidoo kale sameeyn kartaa taariikhda dhicitaanka.
Fariimaha ayaa ku baabi'i karaan sida ugu dhakhsaha badan shan, 10, ama 30 ilbiriqsi ama inay socdaan ilaa hal daqiiqo, hal saac, hal maalin ama hal toddobaad. Ogeysiisku wuxuu si toos ah u qarinayaa fariinta farriinta, markaa maahan inaad ka welwesho qof ku wareersan shaashaddaada. Waxaad isticmaali kartaa Kaaliyaha Google marka habkan loo isticmaalo, sida aan uga doodno hoos.
Allo iyo Kaaliyaha Google
Kaaliyaha Google wuxuu kuu ogolaanayaa inaad hesho meelaha makhaayadaha ku dhow, raadso jihooyin, oo weydii su'aalaha saxa ah ee fariimaha farriimaha. Dhammaan inaad sameyso waa nooca @ google si aad u wacdid wareysiga. (Shaandhayntu waa barnaamij kombuyuutar ah oo loogu talagalay in lagu dhiirrigeliyo wada-hadalka nolosha dhabta ah). Sidoo kale waxaad la hadli kartaa qof-ka-mid ah si uu u helo dhibcaha isboortiga, hubi xaaladdiisa duulimaadka, weydiiso xusuusin, hubi cimilada, waqtiga dhabta ah.
Waxay ka duwantahay kaaliyeyaasha kale ee isku dhafan sida Siri ee Apple in ay ka jawaabto qoraalka aan ku hadlin. Waxay isticmaashaa luqad dabiici ah, waxay ka jawaabtaa su'aalaha la socota, si joogta ahna u barto dabeecadaha hore si ay u bartaan isticmaalayaasha si ka wanaagsan. Markaad la sheekaysato Kaaliyaha, wuxuu kaydiyaa dhammaan weelka, waxaad dib u rogi kartaa oo raadin kartaa raadinta hore iyo natiijooyinka. Akhrinta Siyaasadeed, taas oo saadaalisay waxa jawaabtaada fariin u tahay in ay noqoto mid taariikhdaada ku sawiran, waa mid kale oo haboon.
Tusaale ahaan, haddii qof uu ku weydiiyo su'aal, Akhtarka Jawaabtu wuxuu soo jeedin doonaa talooyin, sida "Anigu ma garanayo," ama "haa ama maya", ama jiido raadinta la xidhiidha, sida maqaaxiyada agagaarka ah, koobiyada filimada iyo wixii la midka ah . Kaaliyaha Google wuxuu sidoo kale aqoonsan karaa sawirada, oo la mid ah Sawirrada Google , laakiin xitaa wuxuu soo jeedin doonaa jawaabaha, sida "aww" marka aad hesho sawir kun ah, ilmo, ama ilmo ama calaamado kale oo ciriiri ah.
Wakhti kasta oo aad la macaamilayso Kaaliyaha Google, waxaad siin kartaa suun ama suulin-hoosaadyo si aad u qiimeyso khibradaada. Haddii aad siisid suulka, waxaad ku sharaxi kartaa sababta aadan ku qanacsaneyn.
Ma hubo sida loo isticmaalo kaaliyaddan sanadka? U sheeg ama qor "maxaad qaban kartaa?" si ay u sahamiyaan noocyada kala duwan ee sifooyinka, kuwaas oo ay ku jiraan liis garaynta, jawaabaha, safarka, wararka, cimilada, isboortiska, ciyaaraha, ka baxitaanka, madadaalada, ficillada, iyo tarjumaadda.
Qorayaasha, Doodles, iyo Emojis
Marka laga soo tago emojis, Allo waxa kale oo ay leedahay ururinta naqshadaha farshaxan-naqshadeysan, oo ay ku jiraan kuwa wax-qabadka leh. Waxaad sidoo kale ku dhejin kartaa oo ku dari kartaa qoraalka sawirada iyo xitaa bedelista cabbirka xajmiga ee saamaynta adoo adeegsanaya muuqaalka hodanka / qaylada. Waxaan u maleyneynaa in qaabka qaylada uu garaacayo farriimaha ALL CAPS, taas oo fikradayada, kaliya ay tahay mid walaac badan in la helo. Waxa kale oo ay badbaadineysaa hal milyan oo dhibcood oo qura. Si aad u qayliso, kaliya ku qor fariin, qaado barta dirista, ka dibna kor u qaad; si fiiqan, sameeya marka laga reebo hoos u jiid. Waxaad taas ku sameyn kartaa emojis marka lagu daro qoraallada.
Google Allo ee Webka
Google ayaa sidoo kale billaabay nambarka shabakadda ee Allo si aad u sii wadi karto joornaalkaaga kumbuyuutarkaaga. Waxay ka shaqeysaa shabakadaha Internetka, Chrome, Firefox, iyo browser Opera. Si aad udhaqaaqdo, waxaad u baahan tahay casrigaaga. Furaha Allo ee shabakadda ee browser aad doorbiday, oo waxaad arki doontaa QR Code gaar ah. Kadibna Allo u furo casrigaaga, oo ku dhaji Moodee > Allo for web > Qayta QR Tijaabi koodka iyo Allo ee webka waa in la bilaabo. Allo loogu talagalay muraayadaha webka waxa ku jira app mobile; haddii telefoonkaaga uu ka baxo batrool ama aad joojiso app, ma awoodi doontid inaad isticmaasho nuqulka webka.
Qaababka qaar ka mid ah lama heli karo bogga internetka. Tusaale ahaan, ma sameyn kartid:
Isku xidh, beddel, ama ka saarto akoonnada Google
Helitaanka ogeysiinta iyo dejinta asturnaanta
Qaado sawir si aad ugu soo dhejiso sheeko
Ku darista Xiriirrada ku jirta Google Voice
Sida loo Isticmaalo Facebook Chat Messenger for iPhone
TNEF waa Fudud 2.2 - Winmail.dat Decoder
Sida loo bilaabo Instagram Live Video
Sida loo soo dejiyo Kik for iPhone, iPod iyo iPad Devices
Sida loo daabaco farriin AIM Mail ama AOL Mail
Sida loo Hirgaliyo Gmail Via Via IMAP ee Barnaamijka Email
Sida Loo Helo Email ee AIM Mail ama AOL Mail
Riix Windows Live Hotmail ee Boostada
Siyaabaha Loogu Kantaroolo Qoraal 3D ah
5 Meelaha ku caawin kara inaad sameyso saaxiibo cusub
Kombiyuutarka D5 ee E525w
Dib u eegid: Hitcase Pro Case Cajiib ah oo aan Cudurka lahayn
Kala hadal Facebook
Nidaamka Kombiyuutarka ee DIY: Sida Loo Helo Loo Dhoofiyo Dhamaan
5 Bilaash oo bilaash ah Musikadaha Goobaha
Wicista Bilaashka Bilaash ah ee Yahoo! Video
Ku darso Hoosaadyada Hordhaca PowerPoint 2003 iyo 2007
Maxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Nidaamka Dib u Dhiska ee Nintendo 3DS
Script - Command Linux - Unix Command
Sida loo furo Internet Explorer 11 ee Windows 10
Talooyinka ugu Sarreeya ee Diyaarinta iyo Gudbinta Imtixaanka CISSP
Aqoonsiga Gaaritaanka Shahaadada Xaqiijinta Wanaagsan
OPPO Digital ee BDT-101ci wuxuu xooga saarayaa rakibayaasha gaarka ah
Doorashada Nidaamka Maareynta Maareynta Munaasibka ah (CMS)
7-dii ugu Diiwaan-galiyay Voice Recorders si ay u iibsadaan 2018
Faa'iidooyinka iyo istcmaalka Qeybinta Sanadka ee Ciyaaraha PC-ga
Sida Loo Siibo Dufcadaha Xulashada Macalinkaaga
Sida loo Isticmaalo Firefox Focus Browser for iOS